Ubekwazi akwenzayo ‘u-brigadier’ – ungoti | Isolezwe
Ubekwazi akwenzayo ‘u-brigadier’ – ungoti
Isolezwe / 3 August 2012, 2:08pm /
UNGOTI ocwaninga ngokusebenza kwamaphoyisa esikhungweni i-Institutte of Security Studies, uDkt Johann Burger, uthi akamangali ngemibiko yokuthi indoda ethinteka emacaleni abucayi obugebengu ibisebenza njengephoyisa izinyanga eziningi ngaphandle kokubanjwa futhi ihola imikhankaso yamaphoyisa esezingeni eliphezulu.
Ukuphawula kuka-Burger kuqhamuke esikhathini lapho izwe libabaza isenzo somlisa waseZimbabwe okuthiwa nguMusa “Muzi” Khumalo (osesithombeni) obezenza ugalagala lwephoyisa ethi ujutshwe ePitoli ehhovisi loKlebe ukuzolwa nobugebengu KwaZulu-Natal futhi ebopha kwasani kwabaduna izimoto kanti liyisigebengu eseqa ngisho ejele. UKhumalo ubethi ungu-Brigadier kwesikhundla sasemaphoyiseni.
UBurger uthe akamangali ngoba kunzima ephoyiseni elingaphansi ngokwezinga ukubuzana nemibuzo kumuntu othi uqhamuka emahhovisi amakhulu futhi ungusigaxamabhande.
“Kuyakhombisa ukuthi le ndoda ibiyazi kahle ukuthi kusetshenzwa kanjani emaphoyiseni futhi inohlelo lokuthi izosebenza kanjani. Alikho iphoyisa elinesikhundla esincane elingafuna ubufakazi kumuntu othi uphuma emahhovisi amakhulu ngoba akucabangeki ukuthi kungaba khona isigebengu esinesibindi sokwenza into enjena,” kusho uBurger.
Uthe akungatshazwa ukuthi amaphoyisa aKwaZulu-Natal angene ehlazweni ngenxa yale ndoda kodwa wagcizelela ukuthi kwesinye isikhathi izigebengu zihlakanipha ngendlela engakholakali.
Uthe akusiwona kuphela umkhakha wamaphoyisa ovelelwa yilento ngoba ngisho kwezokwelapha kunabantu abazenza odokotela eside isikhathi baze babanjwe kudala. Uthe kukhona ngisho abantu abazenza abameli baze bayomela abantu ezinkantolo kanti ngombombayi nabo baze babanjwe kudala.
“Ngikholelwa ukuthi njengoba sekwenzeke le nto abaphathi bamaphoyisa ezweni lonke kufanele bakhiphe incwadi eya kuzo zonke izikhungo zamaphoyisa zibazisa ukuthi uma kukhona umuntu ofikayo kufanele akhiphe ubufakazi obenelisayo bokuthi uyilokho athi uyikho ngempela kucutshungulisiswe kahle ngaphambi kokuba anikezwe umsebenzi,” kusho uBurger.
Uthe lokhu ngeke kubaqede abafana naye kodwa kuyolinciphisa izinga lalezi zigameko ezihlazayo uma sezibanjiwe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Vincent Mdunge, ucashunwe ethi kunamaphoyisa asethunyelwe eZimbabwe naseMozambique ukuyophenya ukuthi le ndoda icashe kuphi. Uthe uKhumalo usize amaphoyisa ukuthi athole izimoto ezingu-40 zokwebiwa ezinye eziduniwe.
UMdunge uthe naye yake yamgila le ndoda eyaze yamthembisa nokumqoba imenze izingcucu.
“Weza ehhovisi lami ezongibuza imibuzo ngengakusho ephephandabeni ngodaba lukaSibusiso Gcabashe owaboshelwa ukuzibiza ngomculi kamaskandi.
“Yangisolisa indlela ayenza ngayo izinto ngaze ngathi kuye akaphume aphele ehhovisi lami. Sengiyabona manje ukuthi wayengalona nhlobo nje iphoyisa. Kodwa ngubani owangacabanga lokho ngaleso sikhathi?”